“Hadaladda xajiinta leh ee ay musharaxiintu is dhaafsanayaan wuxuu dhaacayaa sumcadda Somaliland iyo nidaamka dimoqraadiyadda ee”… wasiirka arrimaha dibadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Hadaladda xajiinta leh ee ay musharaxiintu is dhaafsanayaan wuxuu dhaacayaa sumcadda Somaliland iyo nidaamka dimoqraadiyadda ee”… wasiirka arrimaha dibadda
Published on October 29, 2017 by sdwo · No Comments
Hargeysa(SDWO): Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in hadaladda dhalliilaha iyo xajiimaysta ah ee ay is dhaafsanayeen musharraxiinta madaxtinimada ee xisbiyada qaranku ay dhaawici karto sumcadda Somaliland.
Waxaanu sheegay in arrintaasi ay dhaawacayso hannaanka doorashooyinka iyo itiraaf raadinta dalka, isla markaana looga fadhiyo hogaamiyeyaasha xisbiyadda in ay bulshadda ku kasbadaan barnaamjiyadoodda siyaasadeed iyo waxyaabaha ay ka qaban doonaan duruufaha nololeed ee bulshadda haysta.
Dr. Sacad Cali Shirre, ayaa tilmaamay in aanay kala fogaynta bulshadda oo keliya saamayn ku yeelanaynin hadaladda qalafsan ee ay is waydaarsadaan musharaxiinta xisbiyadu, balse ay hoos u dhigi karaan geedi socodka aqoonsi raadinta Somaliland.
“Waxaa la inagu ammaana nidaamka dimuqraadiga ah ee aynu qaadanay, waxaa la inagu ammaana hab-wanaagii ay inoogu dhaceen doorashooyinkii faraha badna ee aynu soo marnay, oo si wanaagsan inoogu socday. Laakiin, hadda waxaad mooddaa in hadal xajiimayn iyo xanaf leh uu jiro oo aad moodo In quruxdii iyo wanaaggii aynu ku kasbanay hadda siday wax inoogu socdeen wasakheeyay oo uu saameeyay.
Cayda, dhalleecaynta iyo ceebayntu cod ma keenaan. Cadaawad uun bay keentaa, cadaawadduna burbur uun bay keentaa ee waxba ma dhisto. Waxaa loo baahan yahay in siyaasiyiintu ay ka fogaadan wax allaale wixii colaad iyo kala fogayn dhexdeena ku abuuri kara ee wax yeeli kara geeddi socodka itiraafkeena iyo horumarkeena”ayuu yidhi Dr. Sacad oo maanta u waramayay warbaahinta qaranka.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxa uu taxay dhibaatooyinka nololeed ee haysta bulshadda Somaliland ee u baahan in wax laga qabto, kuwaasoo ay ka mid yihiin shaqo la’aanta, biyaha, waxbarashadda iyo caafimaadka.
Isagoo arrimahaas faahfaahinayayna waxa uu yidhi “Dhibaatooyin badan baa jira oo u baahan in wax laga qabto oo lagala hadlo dadka. 70% dadkeenu waa bilaa camal, carruurteena 50% waxba ma bartaan oo iskuul ma tagaan, dadkeena 50% waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan.
Carruurteena dhalata 10-kiiba mid baan gaadhin 5 jir, umul raaca waxaynu caalamka ka nahay lambarka kowaad, dadkeena 50% in ka yar ayaa biyo nadiif ah hesha. Markaa dhibaatooyinkaas oo dhan baa u baahan in laga hadlo oo cid walba (musharaxiinta) waxay ka qabanayso dadka u bandhigto” ayuu yidhi wasiir Sacad.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in xisbiyadu ku eekaadan sharraxidda barmaamijyadooda wax qabad laakiin, aanay xajiimayn u bandhigin bulshada.
“Arrinkaasi wuxuu dhaawacaya geedi socodka itiraafkeena. Doorashooyinkeena caalamka oo dhan baa isha ku haya. Guulo badan baynu ka soo hoynay ilaa hadda.
Dooddii maalintii dhawayd ugub bay ku ahayd gobolka, haddii aanay Afrika-ba ku ahayn, waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah tusaaleyaasheenii hore”ayuu yidhi wasiirka khaarejiga Somaliland.